ईजी वान अप अनलाइन ट्रेनिङ्गबाट मैले बुझेका र जानेका कुराहरु - Suman Rai Dot Com
Suman Rai Dot Com
ईजी वान अप अनलाइन ट्रेनिङ्गबाट मैले बुझेका र जानेका कुराहरु
हाम्रो जीवनमा इन्टरनेटको प्रविधि जोडिएपछि समयलाई आधुनिक युगभन्दा पनि अगाडि बढेर प्रविधिको विकासले आम मानिसहरुको जीवनमा कुनै न कुनै किसिमले प्रभाव पारिरहेको छ । त्यसकारण हामी सबैको जीवनमा सोसियल मिडिया प्रविधिको गहिरो प्रभाव परिसकेको छ । मेरो विचारमा अरु प्रविधिको जस्तै इन्टरनेट प्रविधिका पनि दुईवटा धारहरु हुन्छन् – गुणी र बैगुणी । दोष प्रविधिको हैन, यसलाई प्रयोग गर्ने मानिसहरुमा नै निर्भर हुन्छ । प्रविधिको खराब पक्षहरुलाई बन्द गरेर यसको असल पक्षलाई प्रयोग गर्ने हो भने यो एउटा खुल्ला किताब जस्तै हो । जुन किताबबाट जति शिक्षा लिए पनि भयो र आफूले लिएको शिक्षा जति दिए पनि भयो । यो कहिल्यै रित्तिदैन । यसको कुनै सिमाहरु नै छैनन् अर्थात यो खुल्ला किताबभित्र अनेकौं ज्ञानका भण्डारहरु छन् । प्रचार प्रसारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, अभुतपूर्व चमत्कार नै मान्नु पर्छ । यसको सही सदुपयोग गरेर मानिसहरुले जीवनमा शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक रुपले अथाह परिवर्तन गरेका छन् । यति ठूलो संसारलाई इन्टरनेटले यति सानो बनाईदिएको छ कि, आज हामी एउटा कोठामा बसेर संसार हेर्ने क्षमता राख्दछौं । संसारभरिका मानिसहरुसँग एउटा कोठामा कम्प्यूटरको अगाडी बसेर इन्टरनेटको सहायतामा आफूले चाहे जस्तो कामहरु गर्न सक्छौं । वास्तवमा, यही हो डिजिटल प्रविधिको युग या भनौं इन्टरनेटको युग । यो डिजिटल युगमा हामीले आफूलाई सक्षम बनाउनका लागि यो सम्बन्धि शिक्षा र सिप सिक्न अत्यन्त आवश्यक छ । यस्ता शिक्षा र सिप सिकाउने सम्बन्धित प्राप्त ठूल–ठूला कम्पनिहरु छन् । जुन कम्पनिमा आज लाखौं करोडौं मानिसहरु सक्रिय छन् । तपाई कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित वा कस्ता किसिमका शिक्षा वा सिपमा दक्षता हासिल गर्न चाहानुहुन्छ ? त्यो स्वयम आफैंले निर्णय लिनुपर्दछ । म आफूलाई अनलाईन मार्केटिङ्ग सम्बन्धी केही सिकेर केही गर्ने मेरो इच्छा अनुरुप ईजी वान अप मल्टिप्लेक्स कम्पनिमा आबद्ध भएर यसले प्रदान गरेको अनलाईन मार्केटिङ्ग सम्बन्धि ट्रेनिङ्ग लिई रहेको छु ।
मैले अनलाइन मार्केटिङ्ग नै गर्ने सोच किन बनाए ?
नजानेको तर समय अनुसार माग भएको कुराहरु सिक्न, सिकाउन ।
आफ्नो क्षमतालाई अभिबृदि गर्न ।
स्वरोजगार बनेर केही आर्थिक स्रोतको ढोका खोल्नु ।
यसबाट सिकेको सिप र ज्ञानलाई प्रयोग गरेर अवसरहरुको सिर्जना गर्न ।
व्यवसायलाई आधुनिक ढंगले बृद्दि गर्ने क्षमताको विकास गर्न ।
एउटा कुशल अनलाइन मार्केटर बन्न आदि ......
ईजी वान अप को स्टेप वाइ स्टेप ट्रेनिङ्गबाट मैले सामान्यतया सिकेका र जानेका कुराहरु यस प्रकार छन् ।
ईजी वान अप कम्पनिको ईतिहासदेखि वर्तमानसम्मका कुराहरु बुझ्नुका साथै यसका प्रोडक्टहरु बेसिक लेवलदेखि एड्भान्स लेवलका कोर्षहरुको बारेमा जान्ने मौका पाएको छु । एउटा अनलाइन मार्केटर भएपछि आफूले काम गर्ने कुनै पनि कम्पनि, प्रोडक्ट र सेवाहरुको बारेमा प्रसस्त जानकारी हुन आवश्यक छन् ।
ईजी वान अपको यो ट्रेनिङ्ग कस्ता – कस्ता व्यक्तिहरुले सिक्न सक्छन् ? कस्ता व्यक्तिहरुलाई यो ट्रेनिङ्गको कोर्ष सिक्न सिफारिस गर्न सकिन्छ ? र सिक्न इच्छा भएका व्यक्तिहरुले यही कम्पनिमा कसरी आबद्ध भएर काम गर्न सक्छन् भन्ने कुराको जानकारी पाएकोछु ।
ईजी वान अप कम्पनिले लर्निङ्ग एण्ड अर्निङ्ग भन्ने अवधारणालाई अंगालेको हुनाले ट्रेनिङ्ग गरिसकेपछी यही कम्पनीको प्रोडक्ट सेल्स गरेर सत प्रतिसत कमिसन उपलब्ध गराई इच्छुक मार्केटरहरुलाई आम्दानी गर्ने एउटा छुट्टै अवसर पनि दिएको छ ।
यो ट्रेनिङ्गबाट अन लाइन मार्केटिङ्ग भनेको के हो ? यो कसरी, कहाँ र कति लगानी गरेर सिक्न वा गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु राम्ररी स्टेप वाइ स्टेप सिक्ने मौका पाएको छु ।
अन लाइन मार्केटिङ्ग गर्दा आवश्यक टुल्सहरु कस्ता–कस्ता र के–के हुन्छन् र यसलाई व्यवहारमा कसरी लागु गर्नुपर्छ साथै सेल्स गर्न आवश्यक तयारीहरुको बारेमा जान्ने अवसर पाएको छु ।
हामीले कुनै न कुनै हिसाबले सोसियल मिडियाहरुमा आफूलाई समय कटौतिको लागि व्यस्त बनाईरहेका हुन्छौं तर त्यही सोसियल मिडियाहरुमा त्यही, त्यति नै समय दिएर पनि कसरी राम्ररो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकेकोछु ।
यो कम्पनिबाट प्राप्त हुने एक्टिभ इनकम र पेसिभ इनकम लगायत विन विन कनसेप्ट भनेको के हो र यो कम्पनिले दिने कमिसनहरुको बारेमा पनि रामरी बुझ्न सकिन्छ ।
यो कम्पनीले सिंगल सिंगल कोच सर्पोटको अवधारणालाई कसरी लागु गरेको छ र यसबाट हामीलाई कस्तो किसिमको फाइदाहरु हुन्छन् भन्नेबारेमा बुझ्ने सिक्ने अवसर प्राप्त भएकोछ ।
अन्त्यमा अन लाइन मार्केटिङ्ग रातो रात पैसा कमाउने चिज हैन् । यसमा पैसा कमाउन कडा मेहनत, दृढ इच्छा शक्ति, निरन्तर लागि पर्ने व्यक्तिले मात्र सफल अन लाइन मार्केटर बनेर आम्दानी गर्न सक्छ । यो क्षेत्र पनि अन्य क्षेत्र झैं परिश्रम गरेर मात्र सपल भईने हो भन्ने कुरा सिकेकोछु ।
सिक्ने सिकाउने कुरा अन्त्य कहिल्यै हुँदैन यो अनन्तकालसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो, यसकारण यो क्रम चलिरहन्छ, सिक्दै सिकाउदै व्यवहारमा लागु गर्दै जानु पर्दछ आदी ।
मेरो विचारमा इजि वान अप अनलाइन मार्केटिङ्गको ट्रेनिङ्ग लिएपछि हामीलाई हुने फाइदाहरु
स्वरोजागर बन्न सिकन्छ यदी हामीमा मेहनत, परिश्रम वा लगनसिल भएर काम गर्ने दृढ इच्छा शक्ति छ भने ।
यो ट्रेनिङ्गबाट सिकेको सिपलाई हामीले मार्केटिङ्ग क्षेत्रमा जुन सुकै कम्पनी या व्यवसायको सजिलै प्रवर्धन गर्न सक्छौं । जस बापत हामीले हाम्रो पारिश्रमिक रकम लिएर आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
यो ट्रेनिङ्गले हाम्रो क्षमताको विकास त हुन्छ नै यसले हामीलाई अवसरहरुको सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुराको आत्मबाल बढाउने काम गर्दछ ।
यो ट्रेनिङ्ग लिन वा यो कम्पनिमा रहेर काम गर्न कुनै अफिस या निश्चित ठाउँको जरुरत पर्दैन । जुन सुकै ठाउँ, जुन सुकै समयमा घरमै बसी–बसी सिक्न, सिकाउन र कमाउन सकिन्छ ।
हामीले कुनै व्यवसाय शुरुवात गर्न लगानीको आवश्यक्ता पर्दछ तर यसमा अन्य क्षेत्रमा जस्तो लाखौं लाख लगानीको आवश्यक्ता पर्दैन् । सानो लगानीमा धेरै सिप सिकेर असिमित आम्दानी गर्न सकिने एउटा राम्रो अवसर मिल्छ ।
न कसैको करकाप न कसैको दवाबमा नै बसेर काम गर्नु पर्छ, स्वतन्त्र भएर घरमै बसी–बसी काम गर्न सिकन्छ । यो टाइम फ्री, लोकेसन फ्री काम गर्ने अवसर हो ।
यो ट्रेनिङ्ग लिन कुनै वियषमा डिग्रि गर्नु आवशयक छैन । अंग्रेजी माध्यको यो ट्रेनिङ्ग कोर्षलाई नेपाली टिमका कोच लिडरहरुले नेपाली भर्सनमा पनि तयार गरिदिएकोले सुनमा सुगन्ध थपिएको छ, जसका कारण सामान्य अंग्रेजी लेखपढ गर्न सक्ने र साधारण कम्प्युटर चलाउन जान्ने जो कोहीले पनि सिक्न सक्छन् र स्वदेशमै बसेर अनलाइन मार्केटिङ्गको काम गर्न सक्छन् ।
पार्ट टाइम वा फुल टाइम काम गर्न सकिने ।
अन लाइन मार्केटिङ्ग गर्न आवश्यक चिजहरु
उत्कट इच्छा शक्ति, कडा मेहनत वा निरन्तर लगनसिल व्यक्ति ।
लेपटप वा कम्प्युटर भएको व्यक्ति ।
राम्रो इन्टरनेट भएको व्यक्ति ।
प्रतिदिन कम्तिमा ४ देखी ५ घण्टाको समय दिन सक्ने व्यक्ति ।
Instagram :- https://www.instagram.com/suman_kulung_roye/
लकडाउनको समयमा भिडियो इडिटिङ सिक्नुहोस्
यो लकडाउनको समयमा भिडियो इडिटिङ सिकेर एउटा राम्रो प्लेटफर्म बनाउन सक्नुहुनेछ । तपाईले भिडियो इडिटिङ सिकेर यो लकडाउनमा के गर्दै हुनुहुन्...
म कसरी अनलाइन मार्केटिङमा लागे
नमस्ते मेरो नाम सुमन राई हो । मेरो जन्म २०५५ सालमा पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला संखुवासभाको मकालु ८ मा भएको हो । मेरो शिक्षाको शुभार...
अनुज भाइ डट कमले ल्याएको सुनाैलाे अवसर
नेपालमा अनलाइन मार्केटिङको बिषय नयाँ हो। तर बहिर देशमा यहि अनलाइनको माध्यमबाट आफ्नो व्यापार व्याबसायलाई अघि बढाइ रहेकाछन् । व...
हाम्रो जीवनमा इन्टरनेटको प्रविधि जोडिएपछि समयलाई आधुनिक युगभन्दा पनि अगाडि बढेर प्रविधिको विकासले आम मानिसहरुको जीवनमा कुनै न कुनै क...
के हो अनलाईन मार्केटिङ्ग
कुनै पनि कम्पनीले तयार गरेको उत्पादनलाई ग्राहकहरु समक्ष पु¥याउन गरिने विभिन्न क्रियाकलापलाई अथवा कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्टलाई ग्राहकहर...
Name :- Suman Rai
Address :- Pokhara, Nepal
मेरो नाम सुमन राई हो । म हाल पोखराबाट । ⏩ म एक अनलाइन मार्केटिङ विद्यार्थी भन्न रुचाउछु । अनुज भाई डट कम सपोर्ट टिममा रहेर काम गरिरहेक...
अनलाइन मार्केटिङबाट अपार ज्ञान साथमा आर्थिक लाभ पनि लिन सकिन्छ : – असोक कु. राई
नमस्कार म असोक कु. राई यो संसारमा मानव भएर जन्मिए पछी जिवनलाई अगाडी वढाउँन मान्छेले विभिन्न पेशा, व्यवसाय रोजगार गर्नुपर्दछ । ...